Wasiirka Gaashandhiga oo dhagax dhigay warshad casri ah oo sameysa dharka ciidanka+ sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiirka Gaashandhiga oo dhagax dhigay warshad casri ah oo sameysa dharka ciidanka+ sawirro
Cabdulqaadir Shiikh Cali Diini oo ah wasiirka gaashandhiga ayaa maanta dhagax dhigay Warshad soo saari doonta dharka labiska Ciidanka Qalabka sida, waxana sidoo kale dhagax dhigga Warshaddan goob-joog ka ahaa Wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda.
Wershadan waxaa dhaqaalaha ku baxaya bixineysa Dowladda dalka Turkiga, waxa ay ciidamada ka haqab tiraysaa baahida labiska taasi oo keenaysa in laga maarmo labisyada kala duuwan oo haatan la isticmaalo. Waxana Wasiirku uu sheegay in lixda bilood ee ugu horeysa sanadka cusub uu ku soo gaba-gaboobi doono mashruucan.
“Maanta waa maalin taariikhi ah waxaan dhagax dhignay warshaddii Ciidamadda u sameyn lahayd dharka, waxaan rajeynayaa in warshadani ay anfacdo dalka oo dhan. Warshaddan waxaa noogu deeqay dawladda Turkiga oo mahad uga celinayno” ayuu yiri Wasiir Diini.
Wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii ay Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed u heli lahaayeen dhammaan agabka ay u baahan yihiin si ay dalka guud ahaan u sugaan ammaankiisa. Iyadoo sanadka cusub ee 2016 uu noqon doono mid isbadal ballaaran lagu sameyn doono Ciidanka, sida uu sheegay Wasiirku